UZuma uzobhekana nokusula, nokulawulwa kombuso ePhalamende | News24
UZuma uzobhekana nokusula, nokulawulwa kombuso ePhalamende
Cape Town – UMengameli Jacob Zuma kulindeleke ukuthi abhekane nemibuzo enzima uma esevela ePhalamende, nokuyinto ayenza njalo ngamakota ukuzophendula imibuzo yamaLungu ePhalamende.
AmaLungu ePhalamende kulindeleke ukuthi agxile kwezinye zezihloko ezishisa ibunzi kuleli kusukela agcina ukuvela ePhalamende ukuzophendula imibuzo ngoMashi.
OLUNYE UDABA: Omasipala abangu-9 kuphela kwabangu-263 abathole umbiko ohlanzekile
Kusukela lapho sekube nokuhlelwa kabashu kwePhalamende okukhulu, ukwehliselwa esigabeni esiphansi kweNingizimu Afrika izikhawu ezintathu kanye nokuputshuka kwama-emails aziwa ngama-#GuptaEmails naveza ubukhulu bomthelela umndeni wakwaGupta onawo kuMengameli Zuma, umndeni wakhe, iKhabhinethi kanye nezinkampani zikahulumeni. Ngaphambilini uZuma wabuvikela ubudlelwano bakhe nabakwaGupta, wabachaza njengabangani.
Esikhathini esingaphambilini uZuma ubelokhu ekhombisa ukuqina uma ngabe ebhekene nemibuzo ezinyangeni ezingu-12 ezedlule, ngisho noma ebuzwa imibuzo abengayilindele.
UMengameli uphoqelekile ngokoMthethosisekelo ukuthi azophendula imibuzo ePhalamende, ngokujwayelekile kanye ngekota. Ukuvela kwakhe ezikhathini ezedlule akuzange kube nokuphazamiseka ngemuva kokuthi i-Economic Freedom Fighters (EFF) yanquma ukuduba ukuvela kwakhe ngenxa yokuthi ayisamthathi njengoMengameli.
Ukuhlala kwePhalamende lapho okuzovela khona uMengameli Zuma kuzoqala ngo-14:00 ntambama.